वास्तवमा हाम्रो मानसिक स्थिति कस्तो छ यसले हाम्रो व्यक्तित्वमा केहि हदसम्म प्रभावित गर्छ ।त्यसैले जब कहिले तपाईको अगाडी कोहि व्यक्तित्व परीक्षण गर्न आयो र तपाईले जवाफ दिनुपर्यो भने तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले मात्र आफ्नो वर्तमानको कुरा मात्र भनिरहनु भएको छ ।
अब तपाईको अगाडी यो पाँच तस्विर छ जुनमा तिनीहरुको पछाडीको भाग देखिएको छ। अब तपाईलाई थाहा छैन कि यी युवतीले फर्किन्छ कि फर्किदैन। यी मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को होला। यो त तपाईलाई नै थाहा होला।
यी पछाडीबाट देखिने तस्बिरको अाधरमा ब्यक्तित्व पत्ता लगाउने तरिका चर्चामा छ ।यी माथिका मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को लाग्छ। यी ५ युवती मध्ये कुन युवती मनपर्यो ? एक रोज्नुस् अनि थाहा पाउनुहोस आफ्नो व्यक्तित्व!
तपाईलाई दुविधामा पार्न कसैले सक्दैन। तपाई आफ्नो मनभन्दा दिमागले काम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि तपाईलाई धेरै कुरा हासिल गर्नु छ। त्यसैले तपाई आफुमाथि आउने बाधाप्रति डरा*उनु हुन्न। तपाई निकै नम्र स्वभावको मान्छे हो ।
यो युवति सबैभन्दा धेरै आकर्षित जस्तो लाग्छ भने यसको अर्थ यो हो कि तपाई निकै सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ ।तपाई भित्र बचपना रहेको हुन्छ । तर तपाईलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि तपाई आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ । यस्ता मान्छेहरु प्राय राम्रो मूडमा हुन्छन् र कहिलेकाहिँ मूड खराब हुन्छ। तपाई हरेक स्थितिमा सकारात्मक रहने कोसिस गर्नुहुन्छ ।